Apple Tarisa - Iyo Apple Tarisa | IPhone nhau
Apple Watch Iri izita rewatch yekambani yemapuro, chishongedzo chinonyatsogadzirisa iyo iPhone kuti itipe kubva pachiratidziri chayo akateedzana ezveratidziro dzatinogona kudzora kubva kune yayo nyowani interface yakanyatsogadzirirwa iyo Apple Watch.
Kudzora iyo wachi yeapuro Isu tine bata rekubata uye roulette vhiri inonzi Dhijitari Crown iyo, pamwe neiyo gyroscope, yemoyo yekutarisa uye accelerometers, ichaita iri rakakosha gadget kune vakawanda.
Muenzaniso chaiwo we simbi, muenzaniso mutambo de aluminium uye imwe kufona magazini en 18 karati ndarama. Mhando dzakasiyana dze pulseras kusarudza kuisiya zvachose zvido zvedu.
La utano and the zvigadziri, iyo fashoni isingamire uye uko iyo Apple Watch ine zvakawanda zvekutaura kubvira inokwanisa kuyera kusvika pamwoyo wako. Izvo hazvizoshaikwa mune rako rezuva nezuva kana zvemitambo zuva.
Apple Tarisa Nhau
Kana iwe uchida kuziva nezve ese ma nhau nezve Apple Watch uye verenga nhau dzichangoburwa, zvishongedzo, mafomu anoenderana neApple wachi uye nerumwe ruzivo rwunoenderana, ino ndiyo saiti yako
Iyo Apple Watch yave yakakosha kune vakawanda vashandisi uye tarisiro yakatenderedza iyo itsva…
kubudikidza Miguel Hernandez inoita Mavhiki e2 .
Iyo Apple Watch ine huwandu hwezvikamu, uye sekunge izvo zvanga zvisina kukwana, mazhinji acho anogoneka kuita kunge…
Chidzidzo chitsva chinosimudzira mukana wekuti Apple Watch yedu inoona kutadza kwemoyo isati yaratidza zviratidzo ...
Iyo Apple Watch isina tembiricha sensor?
kubudikidza louis padilla inoita Mavhiki e3 .
Iyo tembiricha yemuviri sensor yaive imwe yeinofungidzirwa hunyanzvi iyo itsva Apple Watch modhi yaizosanganisira, iyo…
Tora Zuva Renyika 2022 Limited Edition Dambudziko Nhasi
kubudikidza Jordi Gimenez inoita Mavhiki e4 .
Nhasi nderimwe remazuva apo vashandisi veApple Watch vane dambudziko idzva rekutora…
Musi waChikumi 6, WWDC22 ichatanga, chiitiko chikuru chevagadziri veApple vegore. Muchikamu chikuru…
Battery Saver mode pa iPhone ne iPad inoderedza huwandu hwesimba rinoshandiswa nemidziyo kana...
watchOS 9 ichave mumwe wevanonyanya kupikisa paWWDC 2022 June anotevera, uye Apple inoita…
Apple inogona kumisa Apple Watch Series 3 gore rino
Iyo Apple Watch Series 3 yakavambwa muna Kurume 2017 uye yakabatanidzwa LTE yekubatanidza sechinhu chemureza. Pasina…
kubudikidza louis padilla inoita 2 mwedzi .
Iwo epamusoro-soro maficha eApple Watch anozivikanwa kune vakawanda, asi pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvatinogona ...
Muna 2021 Apple Watch yakaramba ichirova vese vaikwikwidza
Zvinotaridza kuti nhamba dzekutengesa dzeApple smart wachi hadziregedze kana kuronga kuzviita, zvakanyanya…
Ndeupi musiyano uripo pakati peiyo modhi neGPS uye iyo modhi ine GPS + Cellular?
Maitiro ekugadzirisa iyo Apple Watch iyo inotonhora inoratidza iyo Apple apple